UGary Ruskin, Umbhali e-US Right to Know
About the Author: UGary Ruskin
Posted on February 26, 2021 by UGary Ruskin
UBill Gates Ukudla Tracker, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane
Posted on November 5, 2020 by UGary Ruskin
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesine, Novemba 5, 2020
I-US Right to Know, iqembu elingenzi nzuzo lezempilo yomphakathi, ufake icala namuhla ngokumelene neNational Institutes of Health (NIH) ngokwephula izinhlinzeko ze-Freedom of Information Act.
Icala, elifakwe eNkantolo yesiFunda e-US eWashington, DC, lifuna ukuxhumana nezinhlangano ezifana ne-Wuhan Institute of Virology kanye ne-Wuhan Center for Disease Control and Prevention, kanye ne-EcoHealth Alliance, ebibambisene futhi ixhasa iWuhan Isikhungo seVirology.
Amacala anamuhla aphikisana ne-NIH ayingxenye yemizamo yethu yokuzama ukuthola ukuthi yini eyaziwayo ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, kanye nezingozi zamalabho ezokuvikela kanye nocwaningo lokuzuza umsebenzi, olufuna ukukhulisa ukusabalala noma ukubulala kwamagciwane angaba ubhubhane. Kusukela ngoJulayi, sifake izicelo zamarekhodi omphakathi angama-36, ezombuso kanye nezamazwe omhlaba mayelana nalezi zihloko.
"Ukuvimbela ubhadane olulandelayo kungaxhomeka kakhulu ekuqondeni umsuka walolu olukhona manje," kusho uGary Ruskin, umqondisi omkhulu we-US Right to Know. "Sifuna ukwazi ukuthi ngabe ohulumeni base-US noma baseChina, noma ososayensi abasebenzisana nabo, bafihla imininingwane ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, noma ubungozi bamalabhorethi okuphepha kanye nocwaningo lomsebenzi."
U-NIH usenqabile isicelo sethu se-FOIA futhi wazimisela “ukubamba lawo marekhodi ngokuya nge-Exemption 7 (A), 5 USC § 552, kanye nesigaba 5.31 (g) (l) se-HHS FOIA Regulations, 45 CFR Part 5. Exemption 7 (A) ivumela ukubanjwa kwamarekhodi okuphenya aqoqelwe ukugcinwa komthetho lapho ukudalulwa kungalindelwa ukuthi kungaphazamisa inqubo yokuphoqelelwa. ”
Ukuthola eminye imininingwane ngophenyo lwethu, bona okuthunyelwe kwethu ku “Kungani sicwaninga ngemvelaphi yeSARS-CoV-2, amalebhu ezokuvikela kanye nocwaningo lwe-GOF”Nohlu lwethu lokufunda ku-“Uyini umsuka weSARS-CoV-2? Ziyini izingcuphe zokucwaninga ngomsebenzi?"
I-US Right to Know iqembu lokucwaninga eliphenya ngokugxila ekubonakaleni kwezempilo yomphakathi. Ngeminye imininingwane, bheka iwebhusayithi yethu ku usrtk.org.
Posted on September 23, 2020 by UGary Ruskin
Izifo Ezihlobene Nokudla, izibulala-zinambuzane